Kubatanidza marudzi ezvibereko muShararis anoyananisa zvinotarisirwa mutsika zvakatengwa nemutengi weko nevaya vekunze wainofarira waini, vachiita hukama pakati paFriuli nenyika dzese. Kubva pane winemaking nzvimbo yekuona, kusanganisa kunopa iyo waini zviyero uye kuoma. Nega, Ribolla Gialla ine aromatics iyo isinganyanyo kusimbisa, asi mupiro wayo wakakosha, nekuti inopa iyo kusangana pamwe nekugadzirwa, kutsva, uye vivacity.
Mhando: Chardonnay - Ribolla Gialla
Mazambiringa anotemwa zvakanyatsosarudzika uye anosiiwa kuacerate kwenguva pfupi. Tevere, chibereko chakapwanywa. Iyo inofanirwa kuwana ipapo inobvumidzwa kuti igare. Fermentation inoitika mukushisa-anodzora istainless simbi matangi.
Mushure mekuvirisa, waini inosiyiwa pamapena kwemwedzi mitanhatu. Iyo waini yebhodhoro yakwegura mune inopisa-inodzora binning cellars kwemwedzi miviri isingasviki.
Mhuno: Zvakadzika uye zvinokwezva. Zvinyorwa zvinoyevedza zvemaruva machena uye eruva: jasmine, maruva emupata, ndarama yegoridhe uye mimosa zvine mutsindo mutsva we lime, cherry plum, uye Goridhe apuro. Ndimu inochengetedza pakupedzisa.
Palate: Inorarama, ine mwero, uye yakafukidzwa. Kuve kunofadza kwezvibereko zvichena zvakajeka, loquat, chena churu, jamu, uye kiwi. Balsamic zvinyorwa padhuze uye zvakanaka kupfuurira ne citrus aftertaste.
Livio Felluga Sharis inogadzirwa nemaoko kukohwewa mazambiringa kubva kumakoronga ane kazhinji loam uye sandstone evhu. Kana mazambiringa achisvika muhwina, masumbu anotemwa uye anotenderwa kuita kwenguva pfupi uye zvobva zvamanikidzwa zvinyoronyoro kuti awane izvo zvinofanirwa kujekeswa nekushamisika. Fermentation inoitwa mumatangi esimbi isina mwando pamoto unodzora. Hugumo hwewaini yewaini nemarara ayo akanaka kwemwedzi mitanhatu. Iyo inopedza kunatswa muhombodo kwemwedzi yakati wandei isati yaenda kumusika.
Iko kusanganiswa kwemarudzi ese maviri, imwe yenyika uye imwe yekumwe, inounza kuenzana uye kuomarara kune waini uye inomiririra mubatanidzwa pakati paFriuli pamwe nenyika yose. Kune rimwe divi, iyo Chardonnay akasiyana inopa iwo coupon anonhuwirira hunhu nepo Ribolla Gialla mazambiringa anoipa iwo kuumbwa uye vivacity. Livio Felluga nderimwe remazita makuru ekuwina muItaly. Iye anonzi "baba" weFriuli winemaking. Wokupedzisira, mushure meHondo Yenyika II, akaona kurota kwake kuchiitika, achigadzira waini mudunhu reRosazzo, kwaakazvipira hupenyu hwake kuminda yemizambiringa.